Iqoqo lebhola lokugaya
I-Mega high lokushisa i-ceramic
I-ADVANTAGE OF HIGH ALUMINA BALL
ISICELO Imikhiqizo isetshenziswa kakhulu ku-ceramic, upende, umbala, usimende, ukunamathela, izinto eziphikisayo, imithi, amakhemikhali, imboni yezimayini njll.Izinzuzo ziwubulukhuni obukhulu, ukuminyana okuphezulu, ukulahlekelwa ukuguga okuphansi, ukuma okuvamile kanye nokumelana nokugqwala okuhle njll. I-1) Yakhiwe ngokucindezela kwe-ISO-STATIC nobuchwepheshe bokugoqa baseJapane, ukuminyana okuphezulu nobulukhuni obungakhuthaza ukusebenza kahle kokugaya, ukunciphisa isikhathi sokugaya nokwandisa umthamo wokukhiqiza ngokwandisa isikhala esitholakalayo...
Umshini webhola oqhubekayo
I-Ball Mill iyisisetshenziswa esibalulekile esisetshenziselwa ukuchoboza nokugaya izinto ezingavuthiwe. Isetshenziswa kakhulu ku-ceramic, usimende, ingilazi, umanyolo, imboni yezimayini njll. Ukugaya okumanzi nokomile kwamaminerali nokunye kuyasebenza.
I-continuous ball mill iyimishini emisha esekelwe kumshini we-batch ball wendabuko, ishintsha isakhiwo sokuqala, ingakhuphula ukusebenza kahle kanye nokonga ukusetshenziswa kwamandla, umthamo wokucubungula nawo uzokwandiswa. Isetshenziswa kabanzi ezintweni zokusetshenziswa ze-ceramic, izinto zokwakha ezintsha, izinto eziphikisayo kanye nezinto ezingezona ezensimbi zokugaya.
I-ADVANGE YEBHOLA ELIPHAKATHI LE-ALUMINA
Ibhola le-alumina eliphakathi, ibhola le-alumina ceramic eliphakathi liyindlela entsha yokugaya ethuthukiswe inkampani yethu ngokwezimpawu zokugaya ibhola lasekhaya. Uma kuqhathaniswa nebhola le-ceramic elijwayelekile noma itshe lolwandle, ibhola le-Chinalco ceramic linezici zesilinganiso esinzima, amandla aphezulu, ukumelana nokugqoka, ukumelana nokugqwala, ukugqoka okuncane nokusebenza kahle kokugaya ibhola; Uma iqhathaniswa nebhola le-aluminium ephezulu, inezici zokuqalisa okuphansi zamanje noma zamanje ezisebenzayo kanye nokokufaka kwesikhathi esisodwa okuncane. Ngi...
I-ADVANGE YE-MEIDUM HIGH ALUMINA BALL
Uma kuqhathaniswa nebhola le-alumina eliphakathi, ibhola le-aluminium eliphakeme eliphakathi nobulukhuni obuphakeme nokuminyana, elingathuthukisa ukuzinza kwezinto ezigayiwe. Ukulahlekelwa kokugqoka okuphansi okungahle konga isikhathi sokugaya, kukhulise igumbi lokuphihliza. Ngakho-ke ingathuthukisa ukusebenza kahle kokugaya.
I-Titanium dioxide iyi-pigment yamakhemikhali e-inorganic ebalulekile, ikakhulukazi embotsheni, uyinki wokuphrinta, iphepha, ipulasitiki nenjoloba, i-chemical fiber, izitsha zobumba nezinye izimboni zinezinhlelo zokusebenza ezibalulekile.
Ngokusho kwe-crystalline morphology, ingahlukaniswa ngohlobo lwe-Anatase kanye nohlobo lwe-Rutile.
Uhlobo lwe-Anatase ubumhlophe be-titanium dioxide buhle, kodwa amandla okuthayela angama-70% kuphela ohlobo lwe-rutile. Mayelana nesimo sezulu: ukwengeza ucezu lokuhlola lwe-anatase uhlobo lwe-titanium dioxide lwaqala ukuqhekeka noma luhlakazeke ngemva konyaka owodwa kuphela, futhi lwengeza ucezu lokuhlola lwe-rutile titanium dioxide, ngemva kweminyaka eyishumi, ukubukeka kwayo kunoshintsho oluncane kuphela. Ngenxa yombala omuhle kanye nesimo sezulu se-rutile TiO2, kungcono ukusebenzisa i-rutile TiO2 ngombala wepulasitiki.
Ibhola le-alumina ceramic ephezulu liwumkhiqizo ophezulu we-alumina ceramic okhiqizwa inkampani yethu. Umkhiqizo usebenzisa isifutho esithuthukile samazwe ngamazwe. I-granulation eyomile, ukubunjwa kwe-othomathikhi ye-isostatic eyomile, ukukhiqizwa kokushisa okuphezulu kwe-kiln sintering, nokuhlolwa kobuchwepheshe bokuhlola besimanje Inobunzima obukhulu, isilinganiso esinzima, amandla aphezulu, ukuqina okuhle kanye nesakhiwo sangaphakathi esifanayo. Ngakho-ke, isigayo sebhola sinokusebenza kahle okuphezulu nokugqoka okuncane, okulungele ngokukhethekile i-ball Mill in bui ...
I-roller ye-ceramic yokushisa ephezulu ye-Mega, ekhiqizwa ubuchwepheshe obuphelele baseJalimane kanye nemishini, inokumelana okuhle kakhulu kokushisa okuphezulu, amandla okugoba kanye nokumelana nokushisa okushisayo njll. Iyunithi Yekhodi YeDATHA YOBUCHWEPHESHE MEGA-R75 MEGA-R80 MEGA-R85 Max Working Temp. ℃ 1280 1350 1400 Al2O3+ZrO2 Content % ≥76 81 85 Rate of Water Absorption % ≤9 ≤8.5 ≤7.5 I-Strength Mpa ≥45 ≥51 ≥51 ≥Mal Bend...
I-glazing brightener (umzimba wobumba ungasetshenziswa futhi), i-China isetshenziswa kakhulu esikhundleni se-zirconium silicate noma ufulawa we-zirconium ukukhiqiza i-zircnium opaque frit.
High Purity Alumina Tube, I-Ball Mill Ngekhwalithi ephezulu, I-Alumina Mill Ball, I-Ball Mill Ngebhola Lensimbi, 95 Okuqukethwe Alumina Amabhola, I-Ball Mill Stone Iqoqo Lekhava Encane,